Gudbiyaha Idaacadda | Isku xirka Warshada Gudbinta Studio | Gudbiye FM
FMUSER ADSTL Xidhmada Qalabka Isku xidhka Gudbiyaha Istuudiyaha Dijital ah ee ugu Wanaagsan ee Iibka ah
Qiimaha (USD): 4800
Wadarta (USD): 4800
Habka Rarida: DHL
Lacag bixinta: Paypal
Ku saabsan FMUSER ADSTL
Noocyada Tech Tech
Xidhmada ku jira
Maxaad Mid Ka Dhigtaa
Sida FMUSER ADSTL u shaqeeyo
1. Wax soo saar Dulmar guud FMUSER ADSTL
FMUSER ADSTL, oo sidoo kale loo yaqaan isku xirka gudbiyaha istuudiyaha raadiyaha, isku xirka gudbiyaha istuudiyaha ee ka sarreeya IP, ama isku xirka gudbiyaha istuudiyaha, waa xalka ugu fiican ee FMUSER loo isticmaalo masaafada dheer (ilaa 60 km oo ku saabsan 37 mayl) gudbinta daacadnimada sare ee maqal iyo muuqaal inta u dhaxaysa istuudiyaha baahinta iyo munaaradda anteenada raadiyaha.
Xirmadan baahinta dhijitaalka ah ee aadka isku dhafan waxay dabooshaa istuudiyaha loo baahan yahay si loo gudbiyo qalabka isku xirka ee looga baahan yahay idaacad khabiir ah, oo ay ku jirto gudbiyaha isku xirka studio iyo Qaadaha isku xirka raadiyaha STL oo leh nidaamka xakamaynta bandhigga LCD oo dhamaystiran, bir aan lahayn iftiin ultra-light Anteenada Yagi faa'iido sare leh, ilaa 30m RF khadka anteeno iyo qalab dhamaystiran, kaas oo buuxin kara baahiyaha dhammaan noocyada waaweyn iyo kuwa dhexe ee xarumaha idaacadaha.
Si ka duwan microwave-ka STL (Studio si loo gudbiyo isku xirka), FMUSER ADSTL ayaa ka sii badan qiimaha lagu tartamo gaar ahaan kuwa iibsadayaasha miisaaniyad yar (oo leh kumanaan kun oo doolar ama miisaaniyad ka yar iibsashada). Waxaa dheer, oo leh waxqabadkeeda ugu wanaagsan, FMUSER ADSTL waxay noqonaysaa doorashada koowaad ee tiro idaacado ganacsi iyo kuwo gaar loo leeyahay.
2. Astaamaha Muhiimka ah ee FMUSER ADSTL
Badbaadinta qiimahaaga wax iibsiga - Ilaa 4-way stereo high fidelity XLR signal audio and single-way ASI (SDI) Gudbinta calaamadaha fiidiyoogu waxay si wax ku ool ah u wanaajin kartaa miisaaniyadaada kana fogaato kharashyo dheeri ah: haddii aad iibsanayso qaybo badan oo istuudiyaha ah si aad u gudbiso qalabka isku xidhka ama kiraynta munaaradaha anteenada baahinta qaaliga ah .
Soo ogow kartidaada baahinta - Thanks to warshadeena wax soo saarka iyo kooxda khabiirka RF, raadiyaha ku qeexan software-ka (SDR) iyo tignoolajiyada dhijitaalka ah (encoding, modulation, decoding, iyo demodulation) ayaa ugu dambeyntii la isku daray waxaana loo bixiyaa habka isku xirka istuudiyaha oo dhameystiran oo jaban. . Imaanshaha FMUSER ADSTL waxa ay ka caawisaa in ay buuxiso baahiyaha kala duwan ee hawl-wadeennada idaacadaha, marka loo eego nooca ganacsiga ama nooca gaarka ah, waxa ay si uun u daahfurtay oo horumarisay awoodda idaacadaha baahinta.
Kaafi baahiyahaaga kaliya - Iyada oo leh awood heer sare ah oo ka-hortagga faragelinta, FMUSER ADSTL waxay si fudud u aqoonsan kartaa oo ay uga takhalusi kartaa faragelinta isku xirka istuudiyaha. Dabcan, marka laga reebo mid ka mid ah qodobbada iibinta ugu wanaagsan sida faragelinta ka hortagga, kuwa kale sida gaarsiinta xasilloon, kharash-saaxiibtinimo, soo noqnoqoshada soo noqnoqda, iyo gudbinta masaafada fog ayaa FMUSER ADSTL ka dhigtay qalabka isku xirka istuudiyaha ugu wanaagsan ee iibka ah, kaasoo waxay keentaa si isku mid ah wax qabad sare iyo kharash gadashada ikhtiyaariga ah ee iibsade kasta ee suuqa qalabka baahinta raadiyaha.
Ka dhig inta jeer ee STL mid ikhtiyaari ah Tan ugu muhiimsan, FMUSER ADSTL waxay leedahay isku xidhka isku xirka istuudiyaha ikhtiyaariga ah (laga bilaabo boqolaal iyo kumanaan MHz ilaa 9GHz ugu sarreeya). Haddii aad u baahan tahay istuudiyaha aan shatiga lahayn si aad u gudbiso isku xirka STL ama istuudiyaha shatiyaysan si aad u gudbiso isku xirka, waxaad u gudbin kartaa shuruudahaaga soo noqnoqda ee STL iyo shuruudaha isku xirka qalabka istuudiyaha shuruudaha moodeelka khubaradayada RF. Intaa waxaa dheer, sawirro, fiidiyowyo, iyo tilmaamo ayaa lagu bixin doonaa bilaash si looga fogaado khasaare kasta oo kharash ama waqti ah oo ay sababi karto baahinta shakhsi ahaaneed ee sharci-darrada ah ama xaddidaad kasta oo gaar ah oo ay maamusho maamulka raadiyaha iyo telefishanka maxalliga ah, sg, FCC ee Mareykanka .
3. Maxaad ugu baahan tahay FMUSER ADSTL?
FMUSER ADSTL qalabka isku xirka gudbinta istuudiyaha ayaa lagula talinayaa Haddii aad ku sugan tahay mid ka mid ah xaaladaha soo socda:
Waxaad u baahan tahay inaad hoos u dhigto ama aad ka fogaato kharashka aadka u sarreeya ee ay sababto soo noqnoqda iibsashada qalabka isku xidhka istuudiyaha la awoodi karo iyo nooc kasta oo ah kiraysashada qalabka baahinta (tusaale, kiraysashada munaaradda gudbinta anteenada).
Waxaad u baahan tahay masaafada gudbinta hufan ilaa 60km HD-SDI maqalka iyo calaamadaha muuqaalka ama istuudiyaha dhijitaalka ah oo dhameystiran si aad u gudbiso qalabka isku xirka iibka.
Waxaad u baahan tahay inaad hubiso tayada aan lumin ee codka maqalka iyo muuqaalka inta lagu jiro gudbinta - khasaare la'aan ayaa had iyo jeer la door bidaa.
Waxaad raadineysaa xiriiriyaha istuudiyaha raadiyaha oo tayo leh oo la awoodi karo oo iib ah laakiin adigoon ka warqabin qiimaha wax iibsiga, dhanka kale, waxaad u baahan tahay nidaam dhameystiran oo si buuxda u dabooli kara baahida baahinta shabakadda ee shirkad warbaahineed oo caalami ah, laakiin weli raadineysa. alaab-qeybiyaha qalabka isku xirka istuudiyaha ugu fiican.
Waxaad u baahan tahay HD-SDI maqal iyo muuqaal daacadnimo sare leh si lagaaga gudbiyo meel fog (istuudiyooyiin) idaacadaha baahinta kala duwan (tusaale, xarumaha baahinta FM&TV ee gobolka, iwm.).
Waxa aad haysaa shuruudo aanay badiba tartamayaasha samayn, sida muuqaal ballaadhan oo u dhexeeya istuudiyaha iyo munaaradda gudbinta
4. Sidee FMUSER ADSTL u Shaqeysaa?
1) Yagi Anteenada sida anteenada STL
Guud ahaan, anteenada STL waa anteenada Yagi ee nidaamka isku xirka gudbinta istuudiyaha, kaas oo loo isticmaali karo polarization toosan iyo mid toosan, taasoo bixisa toosin wanaagsan. Anteenada Yagi ee aadka u fiican waxay inta badan leedahay sifooyinka fududaynta raadiyaha aad u fiican, faa'iido sare, miisaan fudud, tayo sare leh, qiimo jaban, iyo iska caabin cimilada.
Istuudiyahan la awoodi karo si loogu gudbiyo xirmada isku xirka, laba anteeno Yagi ah ayaa lagu daray anteenooyinka STL, waxaa lagu rakibi doonaa siday u kala horreeyaan munaaradda anteenada baahinta ee istuudiyaha iyo munaaradda gudbinta, waxaana lagu xiri doonaa gudbiyaha isku xirka raadiyaha STL (istuudiyaha baahinta). iyo qaataha isku xirka raadiyaha STL ( munaaradda gudbinta).
Dhanka kale, laba mitir oo dherer ah oo 30-mitir ah oo RF anteeno ah ayaa lagu xiri doonaa gudbiyaha STL iyo aqbalaha STL siday u kala horreeyaan munaaradda istuudiyaha iyo gudbinta munaaradda waxayna ka shaqeeyaan qayb ka mid ah nidaamka isku xirka istuudiyaha raadiyaha ee HD-SDI maqal iyo muuqaal.
2) Gudbiyaha STL iyo Qaadaha STL
Istuudiyaha wuxuu ku gudbiyaa maqalka iyo muuqaalka la duubay isagoo sii maraya gudbiyaha STL iyo Yagi STL radio link anteenada waxaana helaya gudbiyaha STL iyo anteenada STL ee u dhow qolka injineernimada raadiyaha iyo munaaradda gudbinta.
3) Taawarka Studio-ga iyo Taawarka Gudbinta
Isku xirka gudbiyaha istuudiyaha raadiyaha, gudbiyaha STL wuxuu heli doonaa calaamadaha maqalka iyo muuqaalka dhamaadka istuudiyaha wuxuuna fulin doonaa gudbinta fogaan fog (illaa 60km) inta jeer ee 100 ~ 1000MHz iyada oo loo marayo anteenada baahinta ee u dhow istuudiyaha ( inta badan Yagi anteenada). Kadib anteenada baahinta ee lagu rakibay munaaradda gudbinta (sidoo kale Anteenada Yagi) waxay heli doontaa calaamadaha maqalka iyo muuqaalka ah ee jihada istuudiyaha.
Ugu dambayntii, calaamadahan maqalka iyo muuqaalka ah ee kalsoonida-sare leh waxa u daadici doona macaamiishaada gudbiyaha baahinta raadiyaha iyo anteenada baahinta taageerta.
Isku xirka gudbiyaha istuudiyaha dhijitaalka ah wuxuu leeyahay dulqaad ka wanaagsan oo calaamadaha iyo luminta calaamadaha hoose ee gudbinta calaamadaha maqalka iyo dhibcaha. Isla mar ahaantaana, waxay sidoo kale leedahay sifooyinka qiimaha ultralow iyo fogaanta gudbinta signalada aadka u dheer.
5. Qodobbada ugu muhiimsan ee FMUSER ADSTL
Inkasta oo qiimaha miisaaniyadeed ee noocaas ah, waxqabadkeeda ugu wanaagsan uu weli la barbar dhigi karo boqolaal kun oo doolar oo isku mid ah isku xirka gudbinta istuudiyaha dhijitaalka ah iyo isku xirka gudbiyaha istuudiyaha analoogga:
Sida istuudiyaha isku dhafan ee gudbinta isku xirka, FMUSER ADSTL waxay isla mar ahaantaa gudbin kartaa 4-channel composite XLR stereo audio signals iyo 1-channel ASI (SDI) calaamadaha muuqaalka, kaas oo si wax ku ool ah kuu badbaadin kara qiimaha. Haddii aad dooratid FMUSER ADSTL, uma baahnid inaad iibsato qalabka isku xirka gudbinta STL ee dhowr qaybood oo waxaadna badbaadin kartaa qiimaha kirada ee munaaradda anteenada raadiyaha.
2) Waxqabad Layaab Leh
Marka lagu daro awoodda illaa 60km maqal iyo muuqaal ah, FMUSER ADSTL sidoo kale waxay leedahay awood aad u wanaagsan oo ka-hortagga faragelinta, ma jirto faragelin isku-xir istuudiyaha ah oo isku-dar ah, waxayna qabsan kartaa xargo soo noqnoqota oo ballaaran.
3) Nashqada ugu Fiican
Sifada sirta fudud waxay ka dhigaysaa isku xirka FMUSER ADSTL istuudiyaha gudbiyaha inay leeyihiin ilaalin sare oo gudbin ah iyo sirta calaamadaha. Waxa laguu xaqiijin karaa 99.99% in barnaamijyadaagii si taxadar leh loo soo saaray ee maqalka iyo muuqaalka ah aanay lumin doonin ama lagu heli doonin si khalad ah (tusaale, ma heli doonaan tartamayaashaadu).
4) Soo saaraha ugu sarreeya
Thanks to warshadeena wax soo saarka iyo tignoolajiyada wax soo saarka ee quruxda badan, waxaan hadda nahay istuudiyaha ugu fiican ee gudbinta qalabka isku xirka alaab-qeybiyaha adduunka oo dhan, dhammaan qalabka isku xirka FMUSER istuudiyaha ee iibka ah ayaa ka yaraaday mugga iyo tayada, marka way fududahay in la isku daro sida nidaamka baahinta oo dhamaystiran. Waxa intaa dheer, kooxdayada khabiirka ah ee RF waxay sidoo kale gacan ka geysan doonaan fududaynta hababka aasaasiga ah ee kaydinta calaamadaha, habaynta, iyo isdhaafsiga, si loo helo khibradda isticmaale ee ugu fiican.
5) Waayo-aragnimada dhawaqa ee aan la sinnayn
100% gudbinta tayada codka iyo soo celinta iyadoo la adeegsanayo farsamada maqalka dhijitaalka ah ee DSP.
6) Si Buuxda La Isku halleyn karo
Kaliya daar nidaamka, isku xirka gudbiyaha istuudiyaha wuxuu 24/7 si joogto ah ugu shaqeyn doonaa xaruntaada raadiyaha. Hubinta caadiga ah waa waxa la weydiiyo, marka laga reebo taas, waxay ahaan doontaa mid la isku halayn karo sidii had iyo jeer oo waxay u gudbisaa maqal iyo muuqaal sugan si joogto ah xaruntaada raadiyaha.
7) Nidaamka Ilaalinta Hillaaca
FMUSER ADSTL istuudiyaha gudbinta isku xirka wuxuu leeyahay nidaam ilaalin hillaac u gaar ah. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad ku xirto khadka dhulka oo aad ka tagto inta soo hartay nidaamka ilaalinta. Si kasta oo danabku uga soo galo anteenada isku xirka raadiyaha STL, khadka maqalka, ama nidaamka korontada, qalabka isku xirka raadiyaha STL si fiican ayaa loo ilaalin karaa.
6. Tilmaamo kale
Had iyo jeer xasuuso inaad kala tashato maamullada idaacadaha iyo TV-ga maxalliga ah wax ku saabsan xadka baahinta sharciga ah ama la ogol yahay isku xirka raadiyaha STL, iwm ka hor inta aadan dooran xiriirka ugu wanaagsan ee istuudiyaha raadiyaha ee iibka ah.
Inta jeer ee Nidaamka STL Ikhtiyaarka ah - Si looga fogaado wax kasta oo liddi ku ah macaamiishaada oo ay sababto hawlgal dhinac saddexaad ah (sida baahinta istuudiyaha sharci-darrada ah ee isku xirka isku xirka gudbinta istuudiyaha ee ay dejisay FCC Qeybta 15 ama qaar ka mid ah maamulka raadiyaha iyo TV-ga maxalliga ah), haddii aad u baahan tahay adeegyo gaar ah xargaha soo noqnoqda, tusaale ahaan, istuudiyaha si loogu gudbiyo qalabka isku xirka ee 7GHz-9GHz band soo noqnoqda ama 100MHz-1000MHz (xusuusnow in FMUSER ay bixiso noocyo kala duwan oo xirmooyinka soo noqnoqda ee STL iyo xirmooyinka qalabka STL ee kala duwan), fadlan la xiriir khabiirkayaga RF.
Xalka Dhamaystiran ee baahinta - FMUSER ADSTL waa mid aad u tartamaya marka loo eego qiimaha iyo waxqabadka. Iyadoo isku xirka gudbinta istuudiyaha caadiga ah asal ahaan loo qeybiyay analoog iyo noocyada isku xirka idaacadaha dhijitaalka ah ee istuudiyaha, iyo FMUSER ADSTL waxaa la dhihi karaa waa isku xirka gudbiyaha istuudiyaha ugu jaban.
Aad u jaban - Marka ay ku yar tahay miisaaniyad ku filan kharashaadka qalabka, xidhmadan isku xidhka istuudiyaha raadiyaha ee la awoodi karo oo ay ku kacayso kumanaan doolar ayaa si fudud u dabooli kara baahiyahaaga.
Ma waxaad raadinaysaa kuwaas?
Waad ku mahadsan tahay injineeradayada khabiirka ah iyo warshad wax soo saarka, Uma baahnid inaad ka walwasho in waxqabadkoodu si weyn u kala duwanaan doono sababtoo ah qiimaha kala duwan - xitaa xirmada STL ee miisaaniyada ugu yar ayaa si fiican kuugu adeegi karta. Haddii aad u baahan tahay macluumaad dheeraad ah oo faahfaahsan, fadlan u qaado dhawr daqiiqo mid ka mid ah moodooyinka qalabka STL ee iibkayaga ugu wanaagsan:
Kooxda Freq 7 - 9 GHz
Baahinta kala duwan Ilaa 60 km
Kala duwanaanta hawlgalka 100 - 1,000 MHz
Qiimaha tilaabada soo noqnoqda 10,000 Hz
Kala-baxa soo-noqnoqda ± 10,000 Hz
RF gudbinta awoodda 10 W
RF gudbinta awoodda weecinta ± 0.1%
In-band shucaaca haraaga ah - 80 dB
Shucaaca harmonic sare - 70 dB
Dhawaaqa AM Parasitic - 60 dB
Habka habaynta maqalka 32 QAM@1M
Qaabka qaabaynta muuqaalka 15 bit/s@5M
dareen Qaadashada - 78 dBm
Caqabadda wax soo saarka RF 50 Ohm
Interface wax soo saarka RF N-madax (interfaces kale ayaa sidoo kale la beddeli karaa)
2) GALINTA MAQALKA ANALOG
Dhexgalka qoraalka XLR
Muuqaalka wax soo saarka XLR
Heerka gelitaanka 15 dBm - +15 dm
Caqabadaha galinta 600 Ohm
3) GALINTA MAQALKA DJITAAL AH (AES/EBU OPERATION)
Heerka gelitaanka 39 dBFS - 0 dBFS
Caqabadaha galinta 110 Ohm
Calaamadda saamiga saqafka >85 dB (1,000 Hz, 0 dBm)
Badbaadinta <0.05% (30 Hz - 15,000 Hz, 0 dBm)
Jawaabta inta jeer ee codka ±0.1 dB (30 Hz - 15,000 Hz, 0 dBm)
Kala fogeynta stereo > 80 dB (30 Hz - 15,000 Hz, 0 dBm)
signal Input ASI HD calaamad dhijitaal ah
Dhexgalka qoraalka BNC
Muuqaalka wax soo saarka BNC
Heerka gelitaanka 1Vp-p
4) Naqshadaynta Jirka iyo QOFKA
Cabbirka ( gudbiyaha) (W) 440 mm × (H) 88 mm × (D) 450 mm
Qalabka server-ka ( gudbiyaha) 19 inji 2U rackmount chassis
Miisaanka ( gudbiyaha) 13 kg
Cabbirka (qaataha) (W) 440 mm × (H) 44 mm × (D) 300 mm
Chassis Server-ka (qaataha) 19 inji 1U rackmount chassis
Miisaanka (qaataha) 4 kg
Habka kala-baxa kuleylka Hawo qaboojin (Qasab)
Buuq fanaan <50 dB
5) QOFKA SHAQADA EE LA SOO JEEDIYAY
qoyaan qaraabo .95 XNUMX%
Altitude 4,500 mitir
Quwada korantada 90 VAC - 260 VAC / 47 Hz - 63 Hz
Kuleylka heerkulka -10 ℃ - +45 ℃
Power isticmaalka 50 W
Fadlan ogow in qaar ka mid ah macluumaadka habaynta aasaasiga ah ee xirmada qalabka ADSTL, sida qiimaha u dhigma iyo interface, ay ku kala duwan yihiin si waafaqsan noocyada qalabka kala duwan. Sawirada qalabka ee kor lagu muujiyey waa tixraac kaliya.
1. Maxaa ku jira Xidhmada FMUSER ADSTL?
Isku xirka ADSTL STL gudbiyaha * 1
ADSTL STL qaataha isku xirka * 1
Anteenada isku xirka ADSTL Yagi STL * 2
30m RF Khadadka Anteenada * 2
Buugga Alaabta * 1
2. Ikhtiyaarada kale ee la heli karo ee miisaaniyadaada
FMUSER waxa kale oo ay nashqadaysay tobanaan xidhmooyin qalabka STL oo kala duwan kuwaas oo gebi ahaanba kara la kulan miisaaniyadaada! Aan eegno:
Model No. jiifku Frequency Gudbiyaha/Qaybta Price
ADSTL-M11 2U+1U 100 - 1000 MHz TX: 1 x L/R ama AES/EBU gudaha, 1 x ASI SDI VIDEO gudaha 4800 USD
RX: 1 x L/R ama AES/EBU baxay, 1 x ASI SDI VIDEO baxay
ADSTL-M12 2U+1U 100 - 1000 MHz TX: 2 x L/R ama AES/EBU gudaha, 1 x ASI SDI VIDEO gudaha 5000 USD
RX: 2 x L/R ama AES/EBU baxay, 1 x ASI SDI VIDEO baxay
ADSTL-M13 2U+1U 100 - 1000 MHz TX: 3 x L/R ama AES/EBU gudaha, 1 x ASI SDI VIDEO gudaha 5200 USD
RX: 3 x L/R ama AES/EBU baxay, 1 x ASI SDI VIDEO baxay
ADSTL-M14 2U+1U 100 - 1000 MHz TX: 4 x L/R ama AES/EBU gudaha, 1 x ASI SDI VIDEO gudaha 5400 USD
RX: 4 x L/R ama AES/EBU baxay, 1 x ASI SDI VIDEO baxay
ADSTL-G11 2U+1U 7 - 9 GHz TX: 1 x L/R ama AES/EBU gudaha, 1 x ASI SDI VIDEO gudaha 12800 USD
ADSTL-G12 2U+1U 7 - 9 GHz TX: 2 x L/R ama AES/EBU gudaha, 1 x ASI SDI VIDEO gudaha 13000 USD
ADSTL-G13 2U+1U 7 - 9 GHz TX: 3 x L/R ama AES/EBU gudaha, 1 x ASI SDI VIDEO gudaha 13200 USD
ADSTL-G14 2U+1U 7 - 9 GHz TX: 4 x L/R ama AES/EBU gudaha, 1 x ASI SDI VIDEO gudaha 13400 USD
Haddii aad xiisaynayso wax badan oo isku-darka xirmooyinka qalabka isku xirka STL - dabcan qiimaha ugu fiican iyo tayada sare, ka dib ha ka labalabeyn nala soo xiriir! MAR WALBA WAANU DHAGEYSANAYNAA!
1. S: Ma sharci baa in la isticmaalo istuudiyaha si loogu gudbiyo nidaamka isku xidhka dalkayga?
J: Waxay ku xidhan tahay.
Isku xirka gudbiyaha istuudiyaha waa sharci inta badan wadamada. Wadamada qaarkood, si kastaba ha ahaatee, isticmaalka qalabka isku xirka istuudiyaha waxaa xaddidi doona maamullada maxalliga ah, waxaa lagu weydiin doonaa inaad codsato shatiga, soo gudbiso macluumaadka aad u baahan tahay ee diiwaangelinta, haddii kale, waxaa laga yaabaa in lagugu xukumo ganaax markaad si sharci darro ah u tabiso. Waxay qaadan doontaa wakhti yar in laga fogaado fowdada taasina waa sababta FMUSER ay aad ugu soo jeedinayso inaad ka codsato inta jeer ee baahinta sharciga ah ee raadiyaha maxalliga ah ama maamulada TV-ga si haddii aad iibsato qalabka isku xirka STL, aad u baahin karto si sharci ah. Si kastaba ha ahaatee, wadamada intooda badan, waxaa laguu oggol yahay inaad isticmaasho isku xirka istuudiyaha raadiyaha sidaad rabto, uma baahnid shati iyo lacag dheeraad ah
2. S: Ma ka iibsan karaa isku xirka gudbiyaha istuudiyaha IP radio ADSTL FMUSER marka aan joogo Filibiin?
J: Taasi waa hubaal.
FMUSER waa soo-saare khabiir ah oo ku hawlan sahayda caalamiga ah Istuudiyaha la awoodi karo si loo gudbiyo qalabka isku xirka, waxaanan ku faraxsanahay in macaamiishayada Filibiin ay ku jiraan liiskayaga. Waxaad ka heli kartaa dhammaan noocyada qalabka isku xirka istuudiyaha ee FMUSER kuwaas oo ku kala duwan codsiyada gaarka ah, laga bilaabo isku xirka raadiyaha dhijitaalka ah ee STL ilaa isku xirka analoogga STL, oo ​​ugama baahnid walwal ku saabsan isku xirka gudbinta istuudiyaha! Soo iibso qalabka isku xirka istuudiyaha oo tayo sare leh iyo qiimo jaban? Aynu wada hadalno!
Waa kuwan liiska wadamada aan siino oo aad ka iibsan karto istuudiyo si aad u gudbiso qalabka isku xirka:
Chad, Chile, Shiinaha, Kolombia, Comoros, Kongo, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga, Kongo Republic, Costa Rica, walaal Ivory Coast, Croatia, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Djibouti, Dominika, Dominican Republic, Timor Leste (Timor Leste), Ecuador, Masar, El Salvador, Equatorial Guinea, Eritrea, Estonia, eswatini, Ethiopia, Fiji, Finland, France, Gabon, Gambia, Georgia, Germany, Ghana, Greece, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea Bissau, Guyana, Haiti Honduras, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran, Iraq, Ireland, Israel, Italy, Jamaica, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kiribati, South Korea, North Korea, South Korea, Kosovo, Kuwait, Kyrgyzstan, Laos, Latvia, Lubnaan , Lesotho, Liberia, Libya Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldives, Mali, Malta, Marshall Islands, Mauritania, Mauritius, Mexico, Micronesia (Federation States of), Moldova, Monaco, Mongolia, Montenegro, Morocco, Mozambique, Myanmar (Myanmar), Namibia, Nauru, Nepal, Netherlands New Zealand, Nicar agua, Niger, Nigeria, waqooyiga Macedonia, Norway, Oman, Pakistan, Palau, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Qatar, Romania, Russia, Rwanda, Saint Kitts iyo Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent iyo Grenadines, Samoa, San Marino Sao Tome iyo Principi, Saudi Arabia, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Slovakia, Slovenia, Solomon Islands, Somalia, South Africa, Spain, Sri Lanka, Sultan, Sultan, koonfurta , Suriname, Rui Dian, Switzerland, Syria, Taiwan, Tajikistan, Tanzania, Tanzania, Tanzania, Tonga, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukraine, United Arab Emirates e mirates, United Kingdom, Uruguay, Uzbekistan , Vanuatu, Vatican City, Venezuela, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.
Dabcan, haddii aanad ka iman mid ka mid ah dalalka liiska ku jira, fadlan hubi inaad la xidhiidho kooxdayada iibka, iyo mid ka mid ah xubnahayaga ayaa bixin doona tillaabo kasta oo faahfaahsan si ay kaaga caawiso doorashada nidaamka isku xirka STL ee ugu fiican inta lagu jiro iibka.
3. S: Sidee ayay warfidiyeenadu ugu xidhaan istuudiyaha iyo gudbiyaha?
J: Marka hore waa inaad haysataa isku xirka gudbiyaha istuudiyaha oo aad si fiican ula xiriirto khabiirada idaacadaha sida FMUSER.
Aynu nidhaahno inay jiraan koox warbaahineed oo ADSTL ka iibsatay FMUSER, waana kan sida istuudiyaha loo gudbiyo isku xirka u shaqeyn doono: mar alla markii isku xirka gudbiyaha istuudiyaha uu diyaar yahay, istuudiyaha wuxuu u diri doonaa maqalka iyo muuqaalka munaaradda anteenada gudbineysa, iyadoo calaamadaha ay gudbinayaan gudbiyaha xiriiriyaha STL iyo anteenada Yagi, ugu dambeyntiina waxaa heli doona qaataha xiriiriyaha istuudiyaha iyo Yagi kale.
4. S: Xagee laga soo amaahan karaa nidaamka isku xirka istuudiyaha istuudiyaha raadiyaha?
J: FMUSER waxa laga yaabaa inuu noqdo mid ka mid ah alaab-qeybiyeyaashaada ugu fiican ee xarunta raadiyaha.
Nidaamka isku xirka mikrowave STL waa mid aad qaali u ah dhammaan isku xirka gudbinta istuudiyaha raadiyaha, sidaa darteed wariyayaal badan ayaa dooran doona inay amaahdaan isku xirka gudbinta istuudiyaha la isticmaalay. Sida iska cad, in laga soo iibsado isku xirka gudbiyaha istuudiyaha ADSTL FMUSER waxay la mid tahay ku dhawaad ​​​​qiimihii kiraysashada nidaamka isku xirka STL ee nooca microwave-ka ah. Waxaa laga yaabaa inaadan u baahnayn inaad bixiso kharashka istuudiyaha dheeriga ah si aad u gudbiso qiimaha nidaamka isku xirka ee kireysiga, taa beddelkeeda, weydiinta oraahdii ugu dambeysay ee ADSTL waxay u muuqataa inay tahay doorasho wanaagsan. Haddii aad u baahan tahay tafaasiil dheeri ah oo ku saabsan ADSTL (sawiro, fiidiyowyo, iyo tilmaamo waa bilaash in la isticmaalo) fariintaada dhaaf, waxaanu kuugu soo jawaabi doonaa sida ugu dhakhsaha badan.
5. S: Waa maxay istuudiyaha lagu gudbiyo qiimaha isku xirka?
J: Qiimuhu wuxuu u dhexeeyaa kun USD ilaa toban kun oo kun USD ama xitaa ka badan, iyadoo ku xidhan noocyada.
Qiimayaashu way kala duwan yihiin kuwa soo saarayaasha isku xidhka istuudiyaha iyo noocyada istuudiyaha ilaa qalabka isku xidhka gudbiya. Haddii aad haysato miisaaniyad kugu filan, waxaad ka fiirsan kartaa inaad ka iibsato Rohde & Schwarz. Qiimuhu waa ilaa $1.3W. Haddii miisaaniyadu aysan ku filneyn oo ay weli u baahan tahay gudbinta maqal iyo muuqaal tayo sare leh, waxaad tixgelin kartaa inaad iibsato isku xirka istuudiyaha la awoodi karo ka FMUSER. Waxay ku qaadataa kaliya 3k-5k USD nidaam dhamaystiran oo ay ku jiraan wax walba (tusaale, gudbiyaha STL, qaataha STL, anteenada, iyo agabka)
6. S: Waa kuwee xargaha mikrowave ee shatiga leh ee badanaa la isticmaalo?
J: In ka badan 40GHz waa la ogol yahay gudaha Maraykanka.
Marka loo eego FCC, tignoolajiyada hore waxay xaddidday hawlgallada nidaamyadan spectrum raadiyaha ee kala duwanaanshaha 1 GHz; laakiin horumarinta tignoolajiyada gobolka adag awgeed, nidaamyada ganacsigu waxa ay isu gudbiyaan ilaa 90 GHz. Si loo aqoonsado isbeddelladan, Guddigu wuxuu ansixiyay xeerar u oggolaanaya isticmaalka spectrum ka sarreeya 40 GHz.
spectrum Tani waxay bixisaa fursado kala duwan, sida isticmaalka, iyo waxyaabo kale, muddada-gaaban, nidaamka wireless awoodda sare leh oo taageera codsiyada waxbarashada iyo caafimaadka, helitaanka wireless-ka ee maktabadaha, ama xogta kale ee macluumaadka.
Si kastaba ha ahaatee, waddan kastaa ma raaco mabda'an. Waxaa lagu talinayaa in aad hubiso kooxaha raadiyaha shatiga leh ee dalkaaga si aad uga hortagto baahinta sharci darrada ah ee shakhsi ahaaneed. FMSUER waxay siisaa istuudiyaha kala duwan ee soo noqnoqoshada isku xirka gudbinta si aadan mar dambe kuu xaddidneyn ogolaanshaha gaarka ah ee maamulada idaacadaha maxalliga ah. Xadhkaha soo noqnoqda ee ay bixiso FMSUER waxaa ka mid ah 100MHz-1000MHz, 433-860MHz, 2.3-2.6g, 4.9-6.1g, 5.8G, 7g-9g.
Waxaan bixin doonaa qalabka isku xirka istuudiyaha qiimaha jaban ee moodooyinka kala duwan iyo xargaha soo noqnoqda si loo buuxiyo shuruudahaaga. La xidhiidh khubaradayada RF, wax dheeri ah baro ku saabsan adeegga loo habeeyay ee qalabka isku xirka gudbiyaha istuudiyaha iyo xargaha soo noqnoqda ee FMUSER.
7. S: Sidee lagu ogaan karaa in isku xirka gudbiyaha istuudiyaha uu shati haysto iyo in kale?
J: U rog khabiir RF sida FMUSER gargaar ama la tasho maamulka raadiyaha maxalliga ah.
Kahor intaadan isticmaalin ama iibsan qalabka isku xirka istuudiyaha nooc kasta, hubi inaad la xiriirtay raadiyaha iyo maamulka TV-ga maxalliga ah si aad u codsato shahaadooyinka shahaadooyinka la heli karo ama aad bixiso habraacyo u dhigma sida loogu baahan yahay. Our kooxda RF khabiir wuxuu kaa caawin doonaa inaad wax ka qabato arrimaha soo socda ee helitaanka shatiga nidaamka isku xirka STL - habka oo dhan laga bilaabo isu imaatinka qalabka ilaa 100% hawlgalka nidaamka badbaadada